Home » Travel Associations News » Peace Through Tourism dia nisy ny Fihaonamben'ny Fianakaviana niaraka taminao
Matetika ny fivoriana ataon'ny mpianakavy dia manokana, fa ny fianakavian'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany dia mihevitra fa fianakaviana iray manerantany ny fizahan-tany ary tokony ho tafiditra ao ianao.
Mpanohana, mpikambana ao amin'ny birao ary mpanaraka ny IIvon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) ny fikambanana dia nihaona tamin'ny herinandro lasa teo toy ny fivorian'ny "fianakaviana manerantany" nalamin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary eTurboNews.
Louis D'Amore dia nanangana ny IIPT 34 taona lasa izay ary naneho ny fahavononany handray ireo valam-pihavanana 1000. Amin'izao fotoana izao, IIPT dia nanangana valan-javaboary fandriam-pahalemana any amin'ny kontinanta rehetra afa-tsy ny Antarctica
Ny fivorian'ny mpianakavy dia naheno ny fanavaozana ny toko manerantany toa an'i Jamaica, Aostralia, Iran, ary niarahaba toko vaovao iray tao Maldives.
Matetika dia tsy miankina ny fivorian'ny mpianakavy, fa ny birao IIPT kosa dia nanapa-kevitra ny hanao ampahibemaso ny fivoriana virtoaly tamin'ny herinandro lasa teo. Ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany rahateo dia fianakavian'izao tontolo izao misy mpikambana tia fihavanana amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany na aiza na aiza.
Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana IIPT nanatrika dia i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Ajay Prakash, VP & filohan'ny IIPT India, Kiran Yadov, VP ary mpiara-manorina IIPT India, Diana McIntyre, filohan'ny Caribbean Chapter , Gail Parsonage, filoha IIPT Aostralia, Fabio Carbone, masoivoho IIPT ao Large ary ny filoha IIPT Iran, Philippe Francois, Fikambanan'olom-pirenena ho an'ny fampiantranoana sy fizahan-tany sy fiofanana momba ny fizahan-tany, Juergen Steinmetz, Mpanorina World Network Network ary CEO an'ny Travel News Group, Maga Ramasamy , Filoham-pirenena IIPT Nosy Ranomasimbe Indianina, Ramatoa Mmatsatsi, filoha IIPT Afrika atsimo, Bea Broda, mpanatontosa sarimihetsika, Mohamed Raadih, filoham-pirenena Maldives Chapter IIPT, ankoatry ny hafa.
Ny Ivotoerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) dia teraka tamin'ny taona 1986, Taona Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana, miaraka amin'ny vina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany lasa indostrian'ny fandriampahalemana eran'izao tontolo izao voalohany indrindra ary ny finoana fa ny mpitsangatsangana rehetra dia mety ho "Ambasadaoron'ny fandriampahalemana." Ny fihaonambe voalohany an'ny IIPT, fizahantany: Vital Force for Peace, Vancouver 1988, miaraka amin'ireo solontena 800 avy amin'ny firenena 68 dia hetsika niova. Tamin'ny fotoana nisian'ny fizahan-tany betsaka indrindra dia 'fizahan-tany be', ny Fihaonambe dia nampiditra ny foto-kevitry ny 'Fizahan-tany maharitra' ary koa paradigma vaovao ho an'ny fizahan-tany “Tanjona ambonimbony kokoa” izay manome lanja ny andraikitra lehibe amin'ny fizahan-tany amin'ny fampiroboroboana ny dia sy fandraisana andraikitra amin'ny fizahan-tany izay manampy amin'ny fahatakarana iraisam-pirenena; fiaraha-miasa eo amin'ny firenena; fanatsarana ny kalitaon'ny tontolo iainana; fanatsarana ny kolontsaina sy fitahirizana lova; fampihenana ny fahantrana; fampihavanana sy fanasitranana ratra amin'ny fifandonana; ary amin'ny alàlan'ireo fandraisana andraikitra ireo, manampy amin'ny fananganana tontolo milamina sy maharitra. IIPT dia nandamina fihaonambe iraisam-pirenena 20 sy fihaonam-be manerantany amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fandalinana tranga izay mampiseho sy mampiroborobo ireo soatoavina fizahantany ireo.
10-Manerantany-amin'ny-fandriampahalemana-Dr.-Taleb-Rifai-miaraka amin'i Louis-DAmore-sy-Peter-Kerkar
Tamin'ny taona 1990, ny IIPT dia nanao ny asan'ny fizahan-tany ny fizahan-tany amin'ny fihenan'ny fahantrana amin'ny alàlan'ny famaritana ireo tetikasa mety hitranga any amin'ny firenena efatra any Karaiba ary ny telo any Amerika Afovoany. Taorian'ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana (Fihaonana an-tampon'ny Rio tamin'ny 1992), IIPT dia namolavola ny fitsipi-pitondrana momba ny fitsipi-pitondrantena voalohany sy manerantany momba ny fizahan-tany maharitra ary tamin'ny taona 1993, dia nanao ny fanadihadiana iraisam-pirenena voalohany momba ny Codes of Conduct sy ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fizahantany sy ny tontolo iainana. Fihaonamben'i Montreal an'ny IIPT tamin'ny taona 1994: "Ny fananganana tontolo maharitra amin'ny alàlan'ny fizahan-tany" no fihaonambe iraisam-pirenena voalohany momba ny fizahan-tany maharitra. Ny kaonferansa dia fitaovana lehibe teo amin'ny Banky Iraisam-pirenena nanomboka ny fanohanany ireo tetik'asa fizahan-tany mikendry ny fampihenana ny fahantrana amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana. Masoivoho fampandrosoana hafa narahina ary tamin'ny taona 2000, nanjary eken'ny besinimaro ny anjara asan'ny fizahan-tany amin'ny fihenan'ny fahantrana.
Ny Fanambarana Amman vokatry ny Fihaonana an-tampon'ny IIPT tany Amman, Jordan 2000 dia noraisina ho antontan-taratasy ofisialin'ny Firenena Mikambana. Toy izany koa, ny Fanambarana Lusaka momba ny fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany, ny fanovana ny toetrandro ary ny fandriam-pahalemana, vokatry ny Konferansa afrikanina fahadimy an'ny taona IIPT, dia noraisin'ny UNWTO ary niparitaka be. Ny valandresaka dia nahatonga ihany koa famoahana boky: Meetng ny fanamby amin'ny fiovan'ny toetrandro ho an'ny fizahan-tany ary anisan'ny nahatonga ny UNWTO Fihaonamben'ny Fiangonana faha-2011 notarihin'i Zambia sy Zimbabwe. Ny IIPT Global Symposium, 20 tany Johannesburg, Afrika Atsimo dia nanome voninahitra ny lovan'i Nelson Mandela, Mahatma Gandhi ary Martin Luther King, Jr IIPT koa dia nanasongadina hetsika isan-taona hatramin'ny 2015 tao amin'ny World Travel Market, London - efa-taona lasa tao ITB , Berlin ary fihaonambe maromaro momba ny manor Chapter any Karaiba, Aostralia, India, Jordania, Malezia ary Iran.
Tamin'ny 1992, tao anatin'ny fankalazana ny faha-125 taonan'ny Canada ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-125 niorenan'ny firenena iray, dia nanangana sy nanatanteraka ny “Peace Parks manerana an'i Canada” i IIPT. Tanàna sy tanàna 350 avy any St. John's, Newfoundland ampitan'ny faritra dimy mankany Victoria, British Columbia, dia natokana ho an'ny fandriam-pahalemana ny 8 Oktobra satria naseho tao Ottawa ny tsangambato fitandremana ny fandriam-pahalemana ary 5,000 25,000 ireo mpiambina fandriam-pahalemana no nandinika. Amin'ireo tetikasa maherin'ny 125 Canada21, ny Peace Parks manerana an'i Canada dia voalaza fa "manan-danja indrindra". Nanomboka tamin'izay, ny valan-javaboary fandriam-pahalemana IIPT dia natokana ho lovan'ny fihaonambe iraisam-pirenena IIPT sy ny fihaonambe manerantany. Ny kianja fandriam-pahalemana iraisam-pirenena IIPT izay marihana dia hita any Betania any ampitan'i Jordania, toerana nanaovana batisan'i Kristy; Victoria Falls, iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito voajanahary eto an-tany; Ndola, Zambia, toerana misy ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Dag Hammarskjold nianjera ho any amin'ny iraka fandriampahalemana any Kongo; DMedellin, Kolombia, natokana tamin'ny Andro fisokafan'ny Fivoriamben'ny UNWTO faha-XNUMX; Sun River National Park, Sina; ary ny Toeram-pivavahana Katolika Maritiora Oganda, Zambia.
Misimisy kokoa momba ny fitsidihan'ny IIPT www.iipt.org Misimisy kokoa momba ny fitsidihan'ny WTN: www.tv.travel
Fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny vondrona mahaliana ny fizahantany ao anatin'ny tambajotran'izao tontolo izao: https://rebuilding.travel/peace/